हामी केही दिनमै सरकारमा जान्छौं : लक्ष्मणलाल कर्ण- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'दुई–चार दिनमा हामी सरकारमा जान्छौं । अहिले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने समझदारी प्रधानमन्त्रीसँग भइसकेको छ । '
काठमाडौँ — राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् ।
नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानी :
निष्कासनको घटनाले पार्टी विभाजन भएकै हो ?
अब एक ठाउँमा बस्न नसक्ने र आ–आफ्नो बाटो लाग्ने अवस्था बनेको हो ।
तपाईंहरूसँग पार्टी र संघीय संसद्का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा ४० प्रतिशत पनि छैन । कसरी पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ ?
हामीले किन विभाजन गर्ने ? उहाँहरू (यादव पक्ष) नै जानुहुन्छ ।
यादव पक्षसँग त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छ भने कसरी उहाँहरू जाने कुरा हुन्छ त ?
उहाँहरू कहिले २७ जना त कहिले ३१ जनाको कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँहरूसँग बहुमत छैन ।
अब तपाईंहरूले पुरानै पार्टी राजपा ब्युँताउने हो ?
अहिले त्यतातिर हामी गएका छैनौं । निर्वाचन आयोगमा विवाद जाला । उसले के गर्छ, हेर्नुपर्छ । हुन त नेकपाको विवादकै बेला निर्वाचन आयोगले के गर्‍यो भन्ने देखिइसकेको छ । जसपा एक नरहने स्थिति उपेन्द्रजीले सिर्जना गर्नुभयो । त्यसैले पार्टी विभाजन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामी गर्दैनौं ।
पार्टीमा लफडा हुँदाहुँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने टुंगो लागिसकेको हो ?
हो, दुई–चार दिनमा हामी सरकारमा जान्छौं । अहिले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने समझदारी प्रधानमन्त्रीसँग भइसकेको छ । मन्त्रालयमा कुन दिने कुन राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । त्यसमा टुंगो लाग्नासाथ सरकारमा जान्छौं ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:५०
छक्कापञ्जा भएन भने आठ–दस दिनमा एमाले एकताको परिणाम निस्कन्छ : भीम आचार्य (अन्तर्वार्ता)
गण्डकी सरकारको पहिलो उद्देश्य सबैलाई खोप दिलाउने हुनेछ : मुख्यमन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता)